I-Wind River Place - ene-Hot Tub, ukubukwa kweNtaba !!!
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Rental Advisor
Ukuhlanzeka sikuthatha njengento ebalulekile futhi ukuthuthwa kwendle kuyinto ehamba phambili yethu. Isicoci sethu sokuhlanza siqinisekisa ukuthi ukuphepha kwakho kuza kuqala.
**Le ndawo iyiyunithi eyodwa kwezimbili endlini futhi inamandla okuba nomsindo uma kuthathwa indawo yesibili. Ubhavu oshisayo neshede kuyizinsiza ezabiwe uma elinye iyunithi lisetshenziswa.**
*Sicela ubone uhlu lwe-Wind River Home uma ungathanda ukuqasha indlu yonke.*
Susa ukucindezeleka okuvela emhlabeni wangempela kule ndawo yokuhlala enhle e-Lander, Wyoming. Le ndawo yokuhlehla iyimizuzu emi-5 nje ukusuka ku-Main Street kepha inikezela ngendawo enokuthula enendawo yokuhlala engaphandle kanye nokubukwa kwentaba okumangalisayo. Inemibhede emi-2 kanye nebhavu eligcwele elingu-1, le ndlu eqashisayo eholidini ilungele izithandani ezingu-2 noma umndeni wabangu-4. Indawo yokuphumula kubhavu oshisayo ngemva kohambo lwakho lwangaphandle!
Ngemva kokuzwa ukuhamba ngebhayisikili, ukugibela izintaba, noma ukuqwala izintaba, buyela kule ndlu elungiswe kabusha futhi ushone phansi endaweni engu-1,200 yesikwele sendawo yokuhlala entsha, ekhangayo. Zifudumeze izinzwane zakho ngaseziko le-pellet njengoba uhlezi egumbini lokuhlala noma ekhishini kanye neziko elizinhlangothi zombili. Jabulela ukubuka okuvela emafasiteleni ezithombe abheke ezintabeni.
Imisebenzi yakho yansuku zonke izothuthukisa isifiso sakho sokudla - ngokubonga, ukupheka kuzoba lula ekhishini elifakwe ngokugcwele! Jabulela ukudla kwakho okuzenzela etafuleni lokudlela elivulekile eduze kwasekhishini elihlala abantu abayisithupha!
Kusihlwa kubiza ukuthi uphuze iziphuzo emoyeni omusha wasezintabeni noma ukucwiliswa kubhavu oshisayo wamanzi anosawoti. Zithokozise ngobuhle bemvelo njengoba ilanga lishona phezu kwamagquma futhi uqhubeke ucula ngaphandle njengoba kuba mnyama ukuze kuphele usuku ubuka izinkanyezi nobathandayo!
Ngemuva kwesakhiwo, uzothola i-aspen grove kanye nomfudlana ogeleza. Le ndawo ifaka neshede owamukelekile ukuthi ungagcina kulo ukuhamba ngebhayisikili, ukugibela ukugibela, noma amanye amagiya angaphandle!
- Sebenzisa i-driveway yokuqala ngakwesobunxele enetiyela ngenani eliphakeme lezimoto ezintathu. I-driveway engakwesokudla phambi kwegaraji ingeyabantu abahlala kwelinye iyunithi. Nakanjani akukho ukupaka okuvunyelwe emgwaqeni wasemaphandleni. Noma yiziphi izimoto ezipakwe emgwaqeni zizodonswa.
Amaphuzu Avelele Ezakhiwo
- Izinsiza zifaka ikhishi elihlome ngokuphelele, izihlungi zamanzi e-osmosis ehlehlayo, i-WiFi yamahhala, i-Pak N Play, isitulo esiphezulu, isango lokuphepha kwezingane, ukushisisa okuphakathi, izinto zangasese zamahhala, imishini yokuwasha engaphakathi kweyunithi, izihambeli ezi-5 zangaphandle zamanzi anosawoti ashisayo, ifenisha yevulandi , izihlalo zamagumbi okuphumula ezinama-cushions, ilambu lokushisa, izindawo zomlilo ze-pellet, isitofu segesi, ukubukwa kwentaba, ishede lokugcina izinto zangaphandle, I-Gas BBQ Grill nokunye.
- Indawo ekahle yeLander endaweni yangasese engaphansi kwamamayela ayi-2 ukusuka edolobheni, amamayela ayi-6 ukuya eSinks Canyon State Park, ezungezwe nje ngamathuba okungcebeleka kwangaphandle okusezingeni lomhlaba!
- Indawo inezitholi zentuthu ezihlakaniphile ze-NEST nezitholi ze-carbon monoxide.
Igumbi lokulala 1 - King Bed
Igumbi lokulala 2 – King Umbhede
Umatilasi we-Queen air
Leli khaya eliqashisayo ngeholide lisendaweni eseceleni enikeza umuzwa wobumfihlo nokuthula, kepha lihlala imizuzu emi-5 kuphela ukusuka edolobheni laseLander! Uma ungakuthandi ukupheka endlini, qonda edolobheni ukuze udle kunoma yiziphi izinketho ezihlukile zika-Main Street. Ngenkathi yedolobha, ungase ufune ukuhlola iMnyuziyamu ye-American West noma i-Fremont County Pioneer Museum.
Indawo okuyo ibalulekile kunoma yimuphi umsebenzi wangaphandle, ohlanganisa ukuqwala izintaba, ukugibela ibhayisikili ezintabeni, nokugibela. Chitha usuku e-Sinks Canyon State Park - ngaphansi kwemizuzu eyi-10 ukusuka endlini - umhosha omuhle ongaphansi kwezintaba zoMfula i-Wind. Ukuqwala izintaba, ukudoba, nokuqwala ezinye zezindlela ezidume kakhulu zokuthola le ndawo emangalisayo!
Lo mgwaqo othule onokubukwa okuhle imizuzu emi-5 kuphela ukusuka edolobheni, imizuzu eyi-10 ukusuka eSinks Canyon, kanye nokuhamba ibangana nje ukuya eCity Park ngempela uyisizinda sasekhaya esingahlulwa kunoma ngubani ofuna ukuhlola yonke leyo ndawo ephakathi neWyoming ukuthi anganikela ngayo!
I-Lander Golf & Country Club - cishe imizuzu emi-5 ukushayela
Museum of the American West - ngaphansi kwemizuzu eyi-10 yokushayela
I-Fremont County Pioneer Museum - ngaphansi kwemizuzu eyi-10 yokushayela
I-Sinks Canyon State Park - ngaphansi kwe-10 drive
Isitolo esikhulu esiseduze - imizuzu engaphansi kweyi-10 ukuya e-Safeway
Ibanga eliya esikhumulweni sezindiza - amahora angu-2 nemizuzu engu-15 ukuya eCasper/Natrona County International Airport
Ibungazwe ngu-Rental Advisor
Umnakekeli wendawo uyatholakala eduze.